Taariikh-nololeedkii Jeneral Aadan Gabiyow | BBC Somali
Arbaca, 04.06.2003 - 16:45 Wakhtiga London
Taariikh-nololeedkii Jeneral Aadan Gabiyow
Abdirisaaq Catoosh iyo Xassan Barise - BBCSomali.com
Jeneral Adan Cabdilaahi Nuur ( Gabyow) waxa uu ku dhashay magalada Madogaashe ee gobolka Waqooyiga bari ee dalka Kenya.
Waxa uu askarinimada qortay 1947-dii xiligaasoo uu ku biiray ciidamadii la oran jiray KAR King African Rifle oo Ingiriisku uu lahaa , Batalyanka sadaxaad. Dhibowgana waxa uu kaga baxay Magaalada Jinja ee caasimada labaad ee dalka Uganda.
Isla sanadkii uu dhibowga dhameystey, waxaa loo qaaday magaalada Jigjiga oo ciidamadii KAR ay xaruntoodu ahayd.
Jigjiga ka dib waxaa loo soo badalay magaalada Kismaayo 1950-kii markii dowlada Ingiriisku ay koonfurta Soomaliya ku wareejisay Talyaaniga. Addan gabyow waxa uu ka mid ahaa Cutubkii ugu dambeeyay ee laga soo qaado magaalada Kismaayo. Waxaana lo soo wareejiyay magaalada Yanyuki ee dalka kenya.
1951-dii waxa uu ka mid ahaa ciidamadii Ingiriiska ee ka dagaalamay Dalka Kuuriya. 1952-dii waxaa lagu soo celiyay dalka Kenya.
Isla Sanadkaasi 1952-dii markii uu dhintay King Goerge-kii England adan gabyow waxa uu ka mid ahaa ciidamadii Africaanka ee loo qadaay caleemo saarkii Boqorada Queen Elezabeth waxa uuna ka mid ahaa askartii Kenya ka socotay.
Subaxaasi boqorada la boqrayay Adan Gabyow Allaha u naxariistee waxa uu ka mid ahaa ciidamadii ku horgaardiYay Boqarada waxa uuna safka ugu hore kaga jiray gardigaasi loo samaynayay caleemo saarkii Queen Elizabeth darajadiisuna waxau ahay Sajin Major.
1953-dii waxa uu macalain tawabare meleteri ah ka noqday xerada meleteriga ee Lanet ee ku taala magaalada Nakuru ee dalkan Kenya oo markaasi ahay xarunta Tawabarada ee wadamada Bariga Africa.
1954-tii waxa lagu celiyay Batalyankiisii ama guutidiisii KAR oo markaasi dagaal kula Jirtay Jabhadii Maw Maw-ga ee Kenya xornimada u raadinaysay .
Jeneraal Aadan Cabdullaahi Nuur Gabyow, Allaha-u-Naxariistee waxa uu Soomaaliya soo galay sannadkii 1970-kii isagoo ka soo baxsaday maamulka dalka Kenya halkaasoo la sheegay in uu ka ahaa Gaashaanle ciidamada ka tirsan.
Isla markii uu soo galay dalka waxaa masuul looga dhigay xero markaasi cusbayd oo la dhihi jiray Bootiko, kaddibna loo bixiyey Xerada Tababarka Xalane, halkasoo uu darajada Gaashaanle Sare ku qaatay sannadkii 1976-kii, waxana uu joogay Xalane ilaa sannadkii 1979-kii.
Laakiin, markii la aasaasay Xisbigii Hantiwadaagga Kacaanka Soomaaliyeed sannadkii 1976-dii ayuu Allaha-u-Naxariistee Jeneraal Aadan Gabyow waxa uu ka noqday xubin muhiim ah oo ka tirsan golihii dhexe ee xisbigaasi oo ahaa midkii keliya ee jiray isla markaana talada dalka hayey.
Sannadkii 1979-kii waxa uu General Gabyow qaatay darajada Jeneraalnimada, waxaana laga dhigay wasiirka ku xigeenka Wasaaradda Gaashaandhigga. Sannadkii 1986, ayuu misana waxa uu noqday wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga.
Allaha-u-Naxariistee Jeneraal Gabyow siyaasadda intaasi kagama harin ee waxa uu durbaba noqday guddoomiyaha garab ka mid ah garabyada ururkii SPM.
Jeneraal Gabyow waxa uu misana taxaaluf siyaasadeed la yeeshay Cali Mahdi Maxamed oo markaasi hoggaaminayey rag kaloo badan oo dhammaandoona ka soo wada horjeeday Jeneral Caydiid, waxayna shirkii Addis Ababa ee sannadkii 1993-kii uga qeybgaleen iyagoo la yiraado ururrada 12-ka ah.
Sannadkii 1995-tii waxa uu Jeneraal Gabyow ka mid noqday ururro ku bahoobay magaca SSA oo 13 urur ahaa oo uuna guddoominayey Cali Mahdi Maxamed, waxuuna Jeneraal Gabyow ka qeybgalay shirkii Soodare ee Itoobiya iyo weliba kii Qaahira ee sannadkii 1997-dii kaasoo ay isaga iyo Colonel Cabdullaahi Yuusuf isaga baxeen.
Xilligaasi kaddib, Jeneraal Gabyow waxa uu muddo dheer joogay dalka Itoobiya, isagoo misana mucaaraday shirkii dalka Djibouti ee lagu soo dhisay dowladda KMG ah, wuxuuna dabadeed ka mid noqday guddoonka wareegga ah ee ururka SRRC-da ee lagu soo dhisay dalka Itoobiya, sannadkii 2001.
Geerida Allaha-u-Naxariistii Jeneraal Aadan Cabdullaahi Nuur Gabyow waxa ay tirada hal ka dhimaysaa ragga ay weli tiradoodu soo kordhayso ee hadda u sharraxan madaxweynennimada Soomaaliya ee shirka Soomaalida ee Kenya, waxaana weliba si weyn mar kasta loogu xusuusan doonaa hadalladiisii aanay dhagarta ku jirin ee uu masraxyada siyaasadda dadka ka hor dhihi jiray. Jeneraal Aadan Gabow, Allaha-u-Naxariisto.